ဘာတဲ့ ကျ​နော်​ချစ်​တဲ့ သူ့​ခြေမ​လေးက ရူး​နေတာတဲ့ ~ မောင်သက်ဝေ
ဘာတဲ့ ကျ​နော်​ချစ်​တဲ့ သူ့​ခြေမ​လေးက ရူး​နေတာတဲ့
Thursday, March 13, 2014 Admin
ဘာတဲ့ ကျနော်ချစ်တဲ့ သူ့ခြေမလေးက ရူးနေတာတဲ့
နားထင်ထဲက မီးခိုးတွေ အလျားလိုက် အူထွက်လာသလို ၊ စတင်
ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့သော တန်ဖိုးနည်း အိမ်မက်အပိုင်းအစများ ရေစက်လက်နှင့်
" အန်တီ့ကို ကျနော်ချစ်တယ် " ဆိုတဲ့
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ နံရိုးကြားက ထွက်ကျလာခဲ့သည့် အပြာရောင် မိုးဥတုငယ်လေး
ဒီကဗျာ အပါအ၀င် လူတွေ ၊ စိတ္တဇနာမ်တွေ ၊ နောက်ဆိုးပေါ်နည်းပညာတွေ ၊ အရက်ပုလင်းတွေ ၊
မသမာမှု့နဲ့ သဘောင်္ဘူတာတွေ အားလုံးဟာ ၂၁ ရာစုမှာ ပိတ်မိနေပြီ
အိပ်မပျော်တဲ့ ညတွေဆို အိပ်ဆေးသောက်မဲ့အစား ကြယ်တွေကိုပဲ ရေတွက်နေသင့်တယ်
မီးမလာဘူး၊ ပျက်နေပြီ ရာသီဥတုရော ၊ ဇီဝရော ၊ စာရိတ္တရော အကုန်ပဲ
ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာ ကျွံဝင်သွားတဲ့ အမှတ် ( နုညံ့လွန်းသော အဆိပ် )
စာရေးတက် ဖတ်တက် ယုံလောက်နဲ့တော့ လူငယ်တွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မသိနှိုင်ဘူး
လက်ဖမိုးလေးပေါ်မှာ ၂၆ စက္ကန့်လောက်သေသွားတယ် လို့ ထင်ရပြီး
ပြန် ပြန် ရှင်လာတဲ့ စိတ် ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေး ဆောင်ထားတက်တဲ့ အလေ့အကျင့်ဟာ
လူကြီး လူကောင်း ပီသမှု့ ၊ အဲ့လိုဆို မကောင်းဘူးလား
လက်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားခဲ့မိ ပါးချိုင့်ခွက်လေးတစ်ရံ ၊ အန်တီ ဆံပင်တွေ အရမ်းလှတာပဲ
တကယ်တော့ ကျနော့်အသက်က အခုမှ ၂၀ ကျော်ယုံလေးပါ
အသိအတိုင်း ပြောရရင်တော့ အရမ်းပဲ အသည်းကွဲလို့ကောင်းတဲ့ အရွယ်ပေါ့
ဂျိုးဆက်ဖင်း(န်) ကို ကျနော် လုံးဝ မချစ်ဘူး ကျနော့်ကို ပြောပြပါ
ဗိုက်ပူ သစ်သား ဘက်စ် ကားအိုကြီးပေါ်မှာ ရဲတွတ်နေတဲ့ နုတ်ခမ်းလေးနဲ့ အချစ်ရှိနေတယ် မဟုတ်လား
လူငယ်လေးတစ်ယောက် သွပ်သွပ် ခါအောင် ရူးနေပြီ
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမှတ် (၄) လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ၊ ပဲရစ်က အီဖယ်လ် မျှော်စင်ပေါ်မှာ
နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ရဲ့ စာသင်ဆောင်တွေပေါ်မှာ ၊ နမ်းတက်ခါစ နုတ်ခမ်းလေးပေါ်မှာ
အဲလိစဘတ်စ် သောင်းထွန်းတို့ အိမ်နားမှာ ၊ ဒန်မ်းဖိုက်တံဆိပ် စကော့ ၀ီစကီ ပုလင်းထဲမှာ
ဒီလိုပါပဲ မကြာ မကြာ တော့ မှားဖြစ်ပါတယ်
အပေါစား ရုပ်ရှင်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလို ကျနော့်ကို မလိမ်ပါနဲ့
အသက်ရှူသံတွေ ကြားကထဲက အန်တီဟာ ခေတ်ပေါ်မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်
ကျနော့်ရဲ့ လူငယ်ဘ၀ အာသီသဟာလည်း အန်တီပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကို သိတယ်
လျှပ်စစ် မျှင်တန်းတွေနဲ့ ယက်လုပ်ထားတဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု့တွေ ကြားမှာ
စိတ်ခံစားမှု့ဟာ ရူးနေတဲ့ ခွေးလို အမြုပ် တစီစီနဲ့ တစ်ခုခုကို အလောတကြီး ဆာလောင်နေလိမ့်မယ်
နေပူထဲမှာ လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ အန်တီ
မလိုအိပ်တဲ့ အစိတ် အပိုင်းတွေကို ဖြုတ်ချ၊ ဖျက်ချ ထားခဲ့လိုက်ပါ
နောက်ဆုံးပေါ် လင်ဆာကားသစ်ကြီး စီးချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အာကာသထဲကို အသံတွေ လွင့်လိုက်
သိစိတ်နယ်လွန် ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ တိတိကျကျကို မွေးဖွားလာပါလိမ့်မယ်
အန်တီနဲ့ ကျနော်ရဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှု့ကို ခပ်ရိုင်းရိုင်း ခေါင်စဉ်တစ်ခု တပ်ပေးပါ
နောက်ပြီး နံရံကပ် ခွေးရုပ်လေး ၀ယ်ပေးပါ ( နှိပ်ရင် အသံမြည်ရမည် ) ၊ ခဏ ခဏ နမ်းပါ
မာတင်ဘော(န်)မန်း နဲ့ မာသာ ထရီဇာ ကိုမသိလည်း ကျနော့်ကို ချစ်လို့ရပါတယ်
နုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတွေ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ အန်တီ
ကျနော်ကလည်း ရှက်တက်ကာစ ခေတ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပဲလေ
မဟုတ်ဘူး ၊ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး အန်တီ
ကျနော့်အတွက် အချစ်ဆိုတာ ဘုန်းကြီးလမ်း ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေ
စံပြ ရုပ်ရှင်ရုံကို တစ်နေကုန် ထိုင်ကြည့်နေရခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်
ဒါနဲ့ပဲ လဆန်း ၆ ရက်နေ့မှာ ကျနော်ချစ်တဲ့ သူ့ခြေမလေး ရူးသွားတယ် ။ ။
Posted in: ​မောင်​မိုးမြင့်​ဧ။်​ကဗျာများ
သင့် Email လိပ်စာရိုက်ထည့်ခဲ့ပါ ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါ့မယ်
Kaspersky keys လိုချင်သူများ ဒီမှာ ယူ့ပါ
<center><a href="http://mgthetwai.blogspot.com/" target="_blank"><img src="http://api.ning.com/files/d6wXzvf970TjvF1b-9PxFrejDTfw**dyorhlo7VSYjSfgg3vdeXQyYQcXiWDvCCBeZs8Ck7NFlp-HjwvZ5AsjZJXFzOhhxSi/coollogo_com211746907.gif" border="0" alt="http://mgthetwai.blogspot.com/" /></a></center>
Android Game (6)
Basic Computer (11)
Facebook အကောင့်ဖွင့်နည်း (1)
General Software (13)
Gmail အကောင့်ဖွင့်နည်း (1)
Huawei Firmwares (3)
​Mobile Phone apk (38)
Root and Font installer (3)
Virus Software (3)
window software (1)
Word Lesson (1)
Nero9Free Edition
မောင်သက်ဝေ. Powered by Blogger.
snowStorm.flakesMaxActive = 96; // show more snow on screen at once snowStorm.useTwinkleEffect = true; // let the snow flicker in and out of view
ဘာသာရေးဆိုဒ်များ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အလင်းစက် အမှတ်တရလေးများ ဓမ္မဂင်္ဂါ ပန်းကမ္ဘာ ဓမ္မစေတမန် ဥပါသကာ ဓမ္မဒူတ(ကိုရီးယား) ဒေါင်းမင်း ဓမ္မဥယျာဉ် ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အရှင်လောကပါလ အရှင်ကေလာသ ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒက burmaborn dhammavideo သစ္စာအလင်း အရှင်ဝိစိတ္တ(မနာပဒါယီ) ရွှေဝယ်သားလေး(မောင်းမကန်) ငြိမ်းအေးထွန်း တောင်ခရီးသည် ထွန်းထွန်းလှိုင် ဦးသုမင်္ဂလ ၀ီရဓမ္မ ဓမ္မရံသီ အရှင်အာစာရ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များအသင်း မော်ကွန်းသစ် livedhamma ကျိုက္ကလော့ဆရာတော် ဓမ္မရောင်ခြည် ဥယျာဉ်မှူးလေး နန္ဒသစ္စာ ပုဂံအလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် (တာချီလိတ်မြို့) ၀ါးချက်ဇီဝိတဒါနသံဃဆေးရုံ ကိုရင်လေး မဟာစည်ဝိပဿနာတရားတော်ပြန့်ပွားရေး မော်ကွန်းသစ် သီရိမင်္ဂလာ အလိုတော်ပြည့် M.TET တက္ကသိုလ်မြန်မာကျောင်းသားများ မြတ်ပန်းရဂုံ ဒဿနခရီး အရှင်ကုသလ မင်္ဂလာသတင်းစဉ် အေးချမ်းလေး အဖြူရောင်မေတ္တာ စန္ဒာသူရိယ အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်) သစ္စာအလင်း shweparami ဝေဇယန္တာကျောင်းတိုက် အရိယာဝါသ ရုရှားဆရာတော် ဓမ္မမေတ္တာ ဓမ္မလက်ဆောင် အရှင်သာသန(မုံရွာ) ဓမ္မကုန်းမြေ minthantzaww နေမင်းအလင်း ပြည်တော်ဦး အလှတရား သစ္စာတရားများ စုဝေးရာ ပြတိုက်ငယ် ဓမ္မစေတီဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) တရားတော်များ ဒေါင်းရန် အရှင်ပညိဿရ တောက်ပကြယ်စင် အရှင်သိရိန္ဒ ပြည်တော်ဦး ယောအသင်း ဓမ္မင်္ဂါ သီတဂူစတား ထေရ၀ါဒလူငယ်များအသင်း ဓမ္မရသ သီရိမင်္ဂလာ ရွာဦးကျောင်း chinmg ကဗျာလက်ဆောင် နန်းရှင် အလှတရား အလင်းသစ် အနန္တမေတ္တာ ယနေ့ရေးသောတရားတော်များ မိုးကတ်တရားတော် အရှင်ဥတ္တမာနန္ဒ သဘာဝဓမ္မ thisismyanmar သာသနာ့ရောင်ခြည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အိမ် ချစ်သောကမ္ဘာမြေ မွေးရပ်မြေ အညာ သစ္စာရောင်ခြည် ဓမ္မအလင်းရောင် ဓမ္မပဒ ဓမ္မရသ ဓမ္မသုခ သုခရိပ် ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ဓမ္မရိပ် မင်းဝေ တိပိဋကမြန်မာပြန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကကြီးခကွေး ဗုဒ္ဓဟောကြား သူတော်ကောင်းတရား တရားတော်များ လူသားဗုဒ္ဓ ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင် မိုးကေ အရှင်ဝိသုတ-ရေနီ
ကဗျာဆိုဒ်နှင့်စာပေဆိုဒ်များ BARSကျောင်းသားများနှင့်စာပေချစ်သူများ Bloggerများရဲ့ပို့စ်များ မြန်မာအွန်လိုင်းဘလော့ဂါများစုစည်းရာ အောင်ပိုင်စိုး ငြိမ်းစိုးဦး၏ အက္ခရာရက်စွဲများ မြတ်ဝေ အောင်ရင်ငြိမ်း အောင်ဝေး နေ၀ိုင်ဝိုင် မောင်ယုပိုင် ဇောင်း တောကျောင်းဆရာ ကျော်ညိုသွေး ဆောင်းယွန်းလ အုပ်ကြီး(ကဗျာမဟောင်းတဟောင်းများ) ကောင်းကင်အော်သံ ( ညီဇံလှ) သီဟသူ သူရဿဝါ သစ်ကောင်းအိမ် သစ္စာနီ လရောင်လမ်းကဗျာများ လမ်းအိုလေး လင်းခေတ်ဒီနို ကျွန်မချစ်သောကဗျာများ ရွှမ်းသိင်္ဃ (တနင်္သာရီ) ရင်နှင့်ယက်လုပ်သော နေ့သစ် မောင်သက်ဝေ မနော်ဟရီ ကျွန်တော့်ပြတင်းပေါက်ကလေး ကျွန်တော့်စာမျက်နှာများ... ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ ကဗျာတွေ ကျုံတိုင်းရွာ ကျွန်တော်နှင့်ထနောင်းပင်များ အမှတ်တမဲ့.....နှင်း.... ညိမ်းညို သစ်ကောင်းအိမ် အိန္ဒြာ အဖြူရောင် ကဗျာ... ဇေယျာလင်း မောင်ယုပိုင် ကဗျာနှင့် အရေးအသားများ ကျွန်တော့် ကဗျာ.....ကျွန်တော့် ကမ္ဘာ စာရေးသူတို့ ဆုံဆည်းရာ EqualSignPoetryEtics EMAYAR'S POEMS ကျွန်မချစ်သောကဗျာများ pemskool Xanthos' Poems ကကြိုးများနှင့် နေထိုင်ခြင်း Zephyr's Poems ဘလော့ဂါတို့၏ ကဗျာရပ်ဝန်း မိုဃ်းဝေ တံခါးဖွင့်ထားတဲ့လွင်ပြင် – အောင်သာငယ် စိုင်းဝင်းမြင့် ကျနော့်ရဲ့ကဗျာရွာ ညလင်းအိမ် ခရမ်းပြာကြယ်စင်လှိုင်းခတ်သံများ ခရမ်းပြာထက်လူ အဖြူရောင်စွန်းတဲ့နှလုံးသားများ ၀ိဥာဉ်သစ်စာကြည့် တိုက် ပဉ္စလက်ကောင်းကင်နှင့် အညတရပင်လယ် သုတ၊ရသစာအုပ်တစ်ချို့ဝတ္ထုတစ်ချို့
အလုပ်အကိုင်ရှာရန် VACမှာအလုပ်ရှာပါ Myanmar Network INGO in Myanmar
မြန်မာသီချင်းများ မြန်မာသီချင်းနားထောင်မလား သီချင်းလေးတွေနော် မိုက်တယ်
Scholarships & University National University Of Singapore Nanyang Technological Uni Nanyang Polytechnic Singapore Poly Temasek Poly Asian Institute Of Technological (AIT) ADB-Japan Scholarship Scholarships International Scholarships Collage Scholarship Scholarship Page
online သင်ကြားရေးဆိုဒ်များ WBTS Online Teaching System
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးဆိုဒ်များ Non-Stop English English Club English Zone My Language Exchange OWLS World English Learning English English Learner IELTS TOEFL English At Home Learning English Today Say It In English English4all E-Dform
ဗေဒင်ကဏ္ဌ ဗေဒင်ချစ်သူများအတွက် ဗေဒင်တွက်မည်ဆိုရင်
ကျန်းမာရေးအတွက်ကဏ္ဌ myanmarhealthcare myanmarmedicine Heart Informatoin Public Heart drwinthein
အခြားလေ့လာစရာတွေပါ graphid text တွေလိုချင်ရင် ပုံလှလှလေးတွေပေးကြရအောင် widget လေးတွေသွင်းမလား အပျင်းပြေဂိမ်းဆော့ မယ်
ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းကဏ္ဌ အင်တာနက်ဂျာနယ် Life Styleမဂ္ဂဇင်း အခွင့်အလမ်းဂျာနယ် ရွှေအမြူတေဂျာနယ် လောကအလှမဂ္ဂဇင်း မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အီကိုဗားရှင်းဂျာနယ် ဈေးကွက်ဂျာနယ် Peopleမဂ္ဂဇင်း သရဖူမဂ္ဂဇင်း
ဘောလုံးချစ်သူများအတွက် Weekly Eleven First Elevenဂျာနယ် ဘောလုံးပွဲအဖြေများ soccermyanmarဘောလုံးသတင်း
ရာသီဥတုနှင့်ဆိုင်သော နောက်ဆုံးရသတင်းများ ဇလဗေဒဦးထွန်းလွင်
နည်းပညာဆိုဒ်များ ဘလော့တွေလေ့လာမယ် ဘလော့ဂ်အောက်ခံများအကြောင်း ဘလော့ဂ်အကြောင်း IT အကြောင်းဖတ်ရအောင် သံလုံငယ် နေမင်းခေတ်(နည်းပညာ) ရေခဲမင်းသား ညီနေမင်း ကျော်စွာငြိမ်း မိုးထက်မြင့် မောင်သက်ဝေ ပိုတိုရှော့လေ့လာချင်ရင် စာတမ်းတွေလေ့လာချင်ရင် မာကို့စ် ကိုဇော် မောင်ပညာ ပုံဂံသားမောင်ကျော် ကိုမြတ် ကိုရင်ပြည့်စုံ မောင်စေတနာ ကိုဇောင်း ကြယ်စင်မင်း သူရထွန်း ဂီတနဲ့နည်းပညာ ကိုရန်အောင် ဘုရင့်နောင်
စာအုပ်ဆိုဒ်များ နည်းပညာစာကြည့်တိုက် ကိုရန်နိုင်ဦး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် မြန်မာ ၀တ္ထူစာအုပ်များ တရားတော်များ စာအုပ်များ မြန်မာ E-Library E-books များ
မြန်မာဘလော့ဂ်များ ကဗျာသီတဲ့ကြိုး ကလိုစေးထူး ကိုကိုဖရီး ကိုရင်ညိန်း ကိုရင်နော်၊ ခင်လေးငယ် ကေ ကေဂျွန် ကေ.တီ.အမ် ကေမောင်ငြိမ်း ကေသွယ် (အန်တီ) ကျော်ကျော် ကျော်စွာ ကျော်ဇေယျ ကျော်မင်းထွန်း ကျော်လင်းထွန်း ကျော်လှိုင်ဦး ကျော်ဝင်းမိုး ကျော်သူလင်း ကောင်မလေး ကောင်းကင်ကို ကောင်းခန့် (ရသ) ကောင်းမွန်သောမနက်ဖြန် ကြည်မေကောင်း ကြယ်စင်ကျော် ကြယ်စင်နတ်သမီး ချိုငယ်ဦး ချောအိမာန် ခင်မျိုးဝင်း ခင်မင်းဇော် (အန်တီ) ခိုင်ဇော် ခိုင်ဘိုဘို ချင်းမလေး ချစ်ခြင်းခြေရာ ချစ်စမ်း ချစ်ညီမ ချစ်သဲ ချစ်ဦး ချစ်အိမ်ငယ် ခွပ်ဒေါင်းနီ ချမ်းမြေ့ဦး ခွန်မြလှိုင် ခွန်မောင် ခပ်ရင့်ရင့် အတွေးသံစဉ်များ ခွပ်ဒေါင်းဘုံယံသာ ခွပ်ဒေါင်းမာန် ချယ်ရီပန်း ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ချစ်သူများ ဂျိုကာ ဂျိုးဖြူ ဂျေ ဂျက် (မောင်) ဂျင်းဂျက်ကတ်လေး ဂျစ်တူး ငစနေ ငွေနှင်းမြူ ငွေလမင်း ငှက်ငယ်လေး ငြိမ်းချမ်းအောင် ငြိမ်းငြိမ်း ငြိမ်းစု ငြိမ်းဇေဦး ငြိမ်းဝေ ငြိမ်းအေးထွန်း ငယ်ငယ် ငယ်ဆူးအိမ် စကားဝါမြေ စီးဆင်းဆဲပါ ... ဧရာဝတီ စိုးဇေယျထွန်း စိုးထက် စိုးမိုး စိုးမင်း စိုးမင်းထိုက် စိုးဝှက် စိုးသီဟ စေတန်ဂေါ့ စော (ကို) စောမဏ္ဍိုင် စောလင်းနက်စ် စံလင်းထက် စင်ရော် စိုင်းခမ်းထွန်း စိုင်းစိုင်း စိုင်းဝဏ္ဏ စစ်နိုင် စစ်မုန်းသူ စည်သူ စည်သူ (ကျောက်ဆည်) စိတ်ကူး စိတ္တသုခ စိတ်ဓါတ် စိတ်မီးအိမ် စိတ်ဝိညာဉ်ကလေးရှိရာ စိန်ခလုတ် စိန်မမ စပ်မိစပ်ရာ စွမ်း (ကို) ဆုငယ် (လိပ်ပြာလေး) ဆုရည် ဆုဝေ ဆူးလင်းသစ် ဆွိသဉ္ဇာ ဆိုးသွမ်း ဆုံဆည်းရာ ဆင့်ဆင့် ဆောင်း ဆောင်း - In My World ဆောင်းယွန်းလ ဇာဂနာဘလော့ဂ် ဇီးကွက် Ulmuka ဇေယျာ ဇော်မိုးအောင် ဇော်မျိုးအောင် ဇင်အေးမိသားစု ဇောင်း ဇန် ညမီးအိမ် ညလေး ညီညီ (သံလွင်) ညီမျှ (ကို) ညီမင်းလူ ညီလင်းဆက် ညီလင်းသစ် ညိုကြီး ညိုချော ညောင်ရမ်းဂွတို ဉာဏ်(ကို)စက်မှု၊ နေလွမ်းသူ ညိမ်းညို တာရာ တာရာဖြူ တားတား တီး တူးတူး တို့တစ်တွေရဲ့အစုအဖွဲ့ တိုး (ကို) တေဇာ တေဇာတေ တော့တိုးချန် တော်ကီ တက်လူငယ် တင်နွယ်မောင် တင့်ထူးရွှေ တောင်ကြီး (သို့) ချယ်ရီမြေ တောင်ငူသား တည်ငြိမ်းကို ထိပေ့သျှင် ထားဝယ်သားလေး ထူးမြတ် ထူးလမင်း ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားရေး ထက်ထက်ခိုင် ထိုက် (ကို) ထွန်းထွန်းလှိုင် ထွန်းမျိုးလှိုင် ထိပ် (ဦး) ဒီရေ ဒီလူ ဒီလှိုင်း ဒိုးနပ် ဒေါက်တာကား ဒိုင်ယာရီ ဒိုင်း (မောင်) ဒေါင်းမာန်ဟုန် ဒဏ်ခတ်သူ ဒဏ္ဍာရီည ဓမ္မအလင်းရောင် နဒီမိုးညို နယုန်ထွန်း နေကြီး (ကို) နေချိုအေး နေနေ နေနေနိုင် နေဘုန်းလတ် နေမိုး နေမိုးကြယ် နေနတ်နွယ် နေလင်း နေလွမ်းသူ၊ ဉာဏ် (ကို) စက်မှု နေသွေးညို နေသစ်မှူး နောင်တော်၊ ပိုင်မင်းဆွေ နွေဆူးလင်္ကာ နွေမုန်တိုင်း နွေနှင်း နွေသူရ နျူစွမ်းအင် နိုင်ကို နိုင်းနိုင်း နိုင်းနိုင်း (အမြဲစိမ်း) နိုင်းနိုင်းစနေ နှင်းခါးမိုး နှင်းဆီနီ နှင်းဆီနီနီ နှင်းနှင်း(သိုးမလေး) နှင်းပွင့်ဖြူလေး နှင်းသဇင် နှင်းယွန်းစစ် နောင်ထွန်း နတ်ပျိုမလေး နန်းခိုင်မေမေဦး နယ်စည်းမခြား မြန်မာဘလော့ဂါများ နွယ်သာကီ ပါဂနာ ပိတောက်မြေ ပိတောက်ရိပ် ပီကေ ပီတိ ပုဂံနတ် ပုထုဇဉ် ပုလဲ ပုသိမ် ပိုလှတဲ့ မနက်ဖြန် ပိုးသားဖြူ ပုံရိပ် - စိတ်ကူးပုံရိပ် ပေါ်ပေါ် ပေါက်ကရ ၈၀ ပေါက်ကျိုင်း ပိုင်မင်းဆွေ၊ နောင်တော် ပြည့်စုံ ပြည့်ဖြိုး ပွတ် (မောင်) ပန်တော်ဦး ပန်တော်ဦးသမိုင်း ပန်ဒိုရာ ပန်းခရေ ပန်းခရမ်းပြာ ပန်းပွင်းလေး ပိဿာငါးဆယ် ဖူးဖူး ဖိုးဂျယ် ဖိုးစံ ဖိုးဇင် ဖိုးတရုတ်
NGO & Local Jobs
Mother and Child Health Promoter (Re-advertise) - Dear all, MSF-Holland is currently looking for the position of *Mother and Child Health Promoter (Midwife)* for *Sittwe Project*. The deadline for the p...
၂၁ ရာစု ပင်လုံ တတိယအကြိမ် ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ)
နာဂ NSCN ( K) အနျစီအေ လကျမှတျထိုးရေး မဖွဈနိုငျသေး
Home for Myanmar Merchant Mariners
၈၈၈၈ ပြည်သူ့ နေ့ စဉ် - အဖွင့်စာမျက်နှာ
LastPass: Free Password Manager 4.15.1
Myanmar Mobile App Store (MMAS)
The Download Blog - CNET
7 iPhone security apps
Hangout on Air: Google+ Comments for Blogger
New In Hacking
Sql Injection , SEO , Web Hacking, Mail Hacking
Myanmar social and media sharing network
Mg-ag, log into Facebook with one click
ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၁ ၁ )
Copyright © 2011 မောင်သက်ဝေ | Powered by Blogger